Maanta, waxaan dooneynay inaan noloshaada kuu fududeyno adigoo si toos ah uga jawaabaya su'aal la weydiyay waqtiyo aan tiro lahayn: sida luuqada loogu guuleysto ? mise way adagtahay barashada luuqad? ama maxay qaarkood u sameeyaan ... kuwa kalena, maya? Waxaan halkan ku muujineynaa 5 arrimood oo muhiim u ah guusha barashada luqadda.
Waxaan dadka ka caawinaynay barashada luqadaha, aduunka oo dhan, in ka badan 10 sano (ilaa maanta, sanadka 2020). Waxaan fursad u helnay inaan lahadalno badankood, sidaasna aan ku ogaanno dhibaatooyinkooda iyo dhibaatooyinkooda. Maaddaama beesheennu hadda isu keento in ka badan 10 milyan oo qof, taasi waxay ka dhigaysaa xoogaa jawaab celin ah! Marka, waxaan haynaa fikrad cad oo cad oo ku saabsan waxa shaqeynaya iyo waxa aan ku shaqeyneyn barashada.
Maxay yihiin 5ta qodob ee muhiimka u ah guusha guusha barashada af qalaad? 1. Dhiirigelin
Waxaan ogaanay in dadka ugu dhiiragalinta badan ay helaan natiijooyinka ugu fiican, uguna dhaqsaha badan. Waxaan jecelahay inaan ka fikiro dhiirigelintu waa sida shidaalka oo kale iyo inaan barto luqad, safar ...
5 arrimood oo muhiim u ah guusha barashada luqadda July 10th, 2021Tranquillus
READ Dhibanayaasha: Hordhac ku saabsan Victimology
horeDib u laabashadayda xirfadeed waxay timid waqtigii saxda ahaa waxayna bilawday shaqo abuur lama filaan ah. "
socdaAdduunku waa is beddelayaa, adiguna adiga iyo annaguba!